Ny metaly Billet Hot Furning Furnace amin'ny induction amin'ny fanasan-damba
Home / Induction Forging Furnace / Metaly Billet lafaoro fanefena mafana
Ny metaly Billet Hot Forging Furnace
Sokajy: Induction Forge Furnace, Induction Forging Furnace Tags: Aluminio billet mangatsiatsiaka, aluminium mofomamy mofomamy, bola, Billet Hot Fusion Fandriana, mofomamy mangatsiaka mofomamy induction, kitay varahina mangatsiatsiaka, induction billet hot forging, induction hot etsy, Metals Billet Hot Forging, Ny metaly Billet Hot Forging Furnace, metaly mangatsiatsiaka
Ny metaly Billet Hot Fusion Fandriana amin'ny induction amin'ny fanamafisana ireo barazy vita amin'ny varahina varahina / aluminio / varahina alohan'ny haingam-pako
Fanamorana ny induction dia ampiasaina betsaka amin'ny metaly billet ny orinasa miloko mangatsiatsiaka mba handrehitra ny labozia izay tokony hototoina amin'ny hafanana. Ao amin'ny indostrian'ny orinasa mpanao asa tanana, mafana ny tongotra mangatsiaka amin'ny hafanana manodidina 1000 oC-1250 oC araka ny votoatin'ny karbônina sy ny singa legioma. Ny dingam-pamokarana mafana dia mitaky ny fanasitranana avo lenta ny trano fandroana mitovy eny amin'ny sisin-dalana sy ny sisin-dàlana. Amin'ny ankapobeny, ny hafanana voalohany amin'ny takelaka dia ao amin'ny efi-tranon'ilay efitrano fatoriana ary ilaina ny mandrehitra mihoatra ny fampangatsiahana ny mari-pana amin'ny fikolokoloana mafana. Misy fomba isan-karazany ny manasitrana ny metaly amin'ny famolavolàna mafana, tafiditra ao anatin'izany ny fanamafisana ny induction, ny afon-tsakafon'ny afon-tsolika, ny solika fitrandrahana solika, ny infrared heater ary ny fitaovana fanadiovana herinaratra. Ny fanamorana ny induction dia manana tombontsoa samihafa amin'ny fomba hafa amin'ny fanasitranana amin'ny fingotra mafana. Voalohany indrindra, ny rafitra fanamafisana ny indostria dia mamorona haingana haingana ny haavon'ny hafanana amin'ny famaritana ampahany amin'ny metaly. Fanampin'izany, ny rafitra fanamafisam-pahefana dia rafitra haingana dia haingana, satria ireny rafitra ireny dia tsy mila fotoana fialohan-tsofina toy ny ao amin'ny fanamainam-pako. Ankoatra izany, ny fotoana fampiterahana dia tsy mifanaraka amin'ny fomba hafa. Raha oharina amin'ny fanamainam-pako amin'ny solika sy ny solika, dia mora kokoa ny manara-maso sy mamerina izany fepetra izany amin'ny fotoana hafa. Ny automation dia azo ampiharina amin'ny rafitra fanamorana ny induction. Mila mandefa ambany indrindra izy ireo. Fanamorana ny induction dia manam-bola bebe kokoa ary mahasalama kokoa ny tontolo iainana. Tsy hisy fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana toy ny ao amin'ny fanamainana solika sy solika. Vao mainka mitombo ny fatran-tseranana entona vokatra noho ny fananganana lanja. Ny fanamafisana ny induction dia manome fihenam-bidy lehibe eo amin'ny famolavolana maodelim-pitaratra sy ny fako amin'ny alàlan'ny volavolan-dalàna.
Ho an'ny fanafanana fitaovana bar: toy ny vy sy vy, varahina, varahina, firaka aliminioma, sns.
Sary fotsiny ho an'ny fanondroana, ny loko dia miovaova amin'ny fahefana hafa.
Function sy spécial manokana namboarina araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Fananana sy tombontsoa:
1.Automatika: Fahanana mandeha ho azy, fisafidianana mandeha ho azy ny sombin'asa dia tsara na ratsy, fandrefesana ny mari-pana mandeha ho azy, famotsorana mandeha ho azy.
2. Volavola mifangaro: Mitsitsia fotoana, vidiny ary habaka fametrahana.
3. Operation panneaux naseho nampiseho fanjakana miasa milina, mba hanamorana ny famaritana lesoka.
1 Mafana haingana sy maharitra fitsitsiana 20% - angovo herinaratra 30% noho ny fomba nentim-paharazana;
High efficiency sy ny angovo ambany
2 Vitsy kely Mora ny mametraka, miasa ary manamboatra
3 Azo antoka sy azo antoka Tsy misy fiaramanidina avo, tena azo antoka ho an'ny mpiasanao.
4 Rafi-dàlana hivezivezy Afaka miasa mandritra ny 24 ora
5 miaro tena
function karazana jiro fanairana:
Over-current, Over-voltage, Over hot, Water shortage etc. These lights can control and protect the machine.
6 Fiarovana ny tontolo iainana Saika tsy misy saritera oxide,
tsy nisy vokany, tsy nisy rivo-doza
7 IGBT Aza avela hanelingelina ny tamba-jotra tsy misy ifandraisany;
Ataovy antoka ny faharetan'ny milina.
Parameter of metals billet hot forging furnace:
fahan'ny TOSIKARATRA 3phases, 380V / 410V / 440V, 50 / 60Hz
Oximized frequency 0.5KHz ^ 20KHz (Ny halaviran'ny osam-batana dia alaina araka ny habetsaky ny fantson-drano)
Didy Cycle Loading 100%, 24h miasa tsy tapaka
Mangetaheta ny rano 0.1MPa
lafiny Host 1000X800X1500mm 1500X800X2800mm 850X1700X1900mm
fanitarana Ny fanitarana dia hasiana araka ny lanja sy ny haben'ireo fizarana hafanana
Miankina amin'ny habeny ny fanitarana
Ao anatin'ireo metaly induction ireo mofomamy mofomamy mafana dia mihamafana ny fantsom-bokatra na tsipika. Amin'ny ankapobeny ho an'ny sombin-tsoroka na sombin-tsavoka fatoriana iray na biriky dia ampiasaina mba hanolotra azy ireo avy hatrany ny sora-baventy an-koditra mba hanefy ny sifodran-dalamby, sambo entona mivezivezy na amin'ny sasantsasany pneumatic pushers. Ny kitapo dia avy eo avy eo amin'ny bobongorona iray ao ambadiky ny iray amin'ny rindrina matevina na kofehy vita amin'ny kofehy ampiasaina amin'ny alalan'ny bobongolo izay mampihena ny fahasosorana sy misakana ny akanjo. Ny halavan'ny bobongolo dia singa iray amin'ny fotoana lava fitakiana, ny vanim-potoan'ny vanim-potoana isaky ny elanelana ary ny halavan'ny takelaka. Ao amin'ny tontolon'ny asa lehibe dia misy fizahantany midadasika tsy dia mahazatra loatra ny fantsona 4 na 5 amin'ny seranana mba hanomezana 5 m (16 ft) volan-koditra na mihoatra.
Semi-Automatik Induction Rovitra Afovoany
Fanamboarana tanteraka ny famantaranandro Rod Furnace
Fitrandrahana fiara mitafo amin'ny induction